Umshini Wokusika Umshini Wokusika i-Tube Wokuzenzakalelayo waseChina wase-China | UGoo Hong
Okuzenzakalelayo Professional Tube Laser Cutting Machine
Umshini wokusika we-tube laser othomathikhi onguchwepheshe othomathikhi usebenza kahle, usebenze ngokunemba okuphezulu futhi uthembeke kakhulu ohlanganisa ukulawulwa kwamakhompyutha, ukunemba kokudluliswa kwemishini, nokusika okushisayo. Isibonisi esihle somshini womuntu senza ukusebenza kube lula futhi kube lula, futhi kungasika izikhala ezahlukahlukene ngokushesha nangokunembile. Yamukela ukwakheka okukodwa okukodwa, okushesha ukufaka nokuhamba kalula.
Okuzenzakalelayo professional tube laser cutting umshini
Ukuzenzakalela Okugcwele, Izindleko Zabasebenzi Ezingaphansi
Kulula ukusebenza, ukuvikelwa okuqinile kokuphepha, ukusebenza okuzinzile nokwethembekile.
Ama-Chucks Womoya Ophindiwe Wobungcweti
Ukusebenza kahle okuphezulu: chofoza inkinobho ukucindezela, ukugxilisa okuzenzakalelayo, ukushesha okuphindwe kathathu kune-chuck kagesi; Ukunemba okuphezulu: amandla amakhulu futhi aqinile wokuqinisa, akukho ukukhululeka kweshubhu, ukusika ukunemba okuqinisekisiwe;
Ukuzinza okuphezulu: ukwesekwa kweshubhu okukhethekile kungagwema ukuwohloka kweshubhu nokusonteka, okunembile nokuhlala isikhathi eside;
Ukusika Inhloko Okukhethekile Kwokusika Tube
Okukhethekile smart ahlabayo ikhanda kwenza izinhlobo ezahlukene tube ahlabayo lula;
Ngenxa yomklamo okhonjisiwe, kulula ukuvimbela ukushayisana lapho usika amashubhu abukhali;
Ama-lens amasha wokuhlanganisa nokuvikela, ukuvikelwa okungcono kwezingxenye eziyinhloko.
Qaphela ukwehlukaniswa kwezinto ezihlakaniphile, ukondla nokungena ngaphandle komthungo ngomshini wokusika we-fiber laser ngemuva kokuthi zonke izigaxa zamashubhu zifakwe kudivayisi yokuphakela, futhi uqinisekise ukuthi kuneshubhu eyodwa kuphela ehanjiswa engalweni ehambisa isikhathi ngasinye.
Umkhiqizo ophelile uphonswa ngokuzenzakalela emgqonyeni wesitoreji, ukwesekwa okuphindwe kabili kokwesekwa okusizayo kwamashubhu we-overlong.
Imodeli yomshini I-GHJG-F6020T
Ukuzisika ububanzi bethubhu eliyindilinga 20-200mm
Ukuphuca ububanzi tube isikwele 20 * 20mm-150 * 150mm
UMax. Ijubane Lokuhamba 100m / iminithi
Isivinini esisheshayo 1G
1.Ingasika imigqa nezimbobo ezinamadayimitha ahlukile kusuka kuzikhombisi ezahlukahlukene epayipini, futhi ihlangane nesimo sempambana yokuma mpo ye-centrifugal ne-non-centrifugal yegatsha ne-eksisi enkulu yepayipi.
2.Ingasika amakholomu Awele Imigqa ekugcineni kwepayipi legatsha, futhi ahlangane nesimo sempambana yokuhlangana esiyi-centrifugal ne-non-centrifugal yegatsha kanye ne-eksisi enkulu yepayipi.
3.Ingakwazi ukusika isigaba esincikile engxenyeni yokugcina yepayipi.
4.Ingakwazi ukusika ipayipi legatsha elihlangana nepayipi eliyindilinga eliyinhloko.
5. Ingabe usike variable engela wotho ebusweni
6.Ingasika imbobo eyisikwele, izimbobo ezimise okhalweni nembobo eyisiyingi epayipini.
7. Inganciphisa ipayipi.
8. Can usike zonke izinhlobo zehluzo ebusweni bepayipi lesikwele.
Langaphambilini Umshini wokusika we-Tube Fibre Laser
Olandelayo: Umshini Wokushisela we-Laser ophethwe ngesandla
2kw fibre laser cutting umshini
othomathikhi ipayipi ahlabayo umshini
othomathikhi tube tube laser cutting umshini
Umshini wokusika wensimbi we-laser wensimbi
imishini yokusika i-fiber laser
umshini wokusika we-fiber optic
fibre optic tube umsiki
umshini wensimbi we-tube laser cutting
umshini wokusika ityhubhu oyisikwele
Platform Single Plate kanye Tube Laser Cutting Ma ...